Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-COVID-19 iidethrones ngo-1918 umkhuhlane njengobhubhane wase-US oyingozi
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Inani lokusweleka okuchazwe kwi-COVID e-US liya kugqitha kumrhumo wobhubhane womkhuhlane we-1918 kule nyanga. Asinakuba lukhuni kuqhubeke, kwaye ubukhulu becala kuthintelwe, intlekele.
Ukufa kwe-COVID-19 yase-US ngaphezulu kwama-675,000, nge-coronavirus ethatha indawo yomkhuhlane ka-1918 ngowona bhubhani ubulalayo wase-US.
Zingaphezulu kwama-42,000,000 iimeko ze-COVID-19 zosulelo e-United States of America njengangoku.
Umkhuhlane wango-1918 wabulala abantu abamalunga ne-675,000 baseMelika kwaye wabonwa njengoyena bhubhani ubulalayo kwimbali yakutshanje
Ukusukela nge-4: 21 pm Ixesha eliqhelekileyo laseMpuma ngoMvulo, nge-20 kaSeptemba, ama-675,446 baseMelika baphulukene nobomi babo ngenxa yesibetho se-COVID-19, ngokwenombolo yeYunivesithi yaseJohn Hopkins, oko ke kugqithise ukubhubha kwabantu abangama-675,000 e-US ngexesha lomkhuhlane we-1918.
Amatyala osulelo e-COVID-19 e-United States ayengaphaya kwezigidi ezingama-42.
Inani lokusweleka kulindeleke ukuba liqhubeke nokunyuka njengoko i-United States kungoku nje ifumana olunye usulelo olutsha, oluqhutywa kukunwenwa okukhawulezayo kwe-Delta.
“Inani lokusweleka okuchazwe kwi-COVID e-US lizakudlula inani lomkhuhlane ka-1918 kule nyanga. Asinakuba lukhuni kwinkxwaleko eqhubekayo, kwaye ikakhulu enokuthintelwa, ”uthumele uTom Frieden, owayeyintloko yamaziko oLawulo lweZifo noThintelo, kwiveki ephelileyo.
Umkhuhlane we-1918 wabulala ama-675,000 amaMelika, ngokwe Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo Kwaye yathathelwa ingqalelo njengoyena bhubhani ubulala eMelika kwimbali yakutshanje kude kube ngoku.
Ngeli xesha, Umongameli wase-US uJoe Biden bazakufumana i-COVID-19 booster shot kwiTV, unobhala weendaba e-White House uJen Psaki uxelele amajelo eendaba ngoMvulo. U-Biden uzimisele ukufumana abantu baseMelika ukuba bagonywe phakathi kokugxekwa kwephiko lasekunene kwigunya lakhe lokugonya.